Calcium Chloride (ကယ်လ်စီယမ် ကလိုရိုက်) - Hello Sayarwon
Calcium Chloride (ကယ်လ်စီယမ် ကလိုရိုက်)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Calcium Chloride (ကယ်လ်စီယမ် ကလိုရိုက်)
Calcium Chloride (ကယ်လ်စီယမ် ကလိုရိုက်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Calcium Chloride (ကယ်လ်စီယမ် ကလိုရိုက်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Calcium Chloride (ကယ်လ်စီယမ် ကလိုရိုက်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Calcium chlorideကိုသွေးတွင်းကယ်လ်ဆီယမ်ဓါတ်နည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောကြွက်တက်ခြင်းအားအရေးပေါ်ကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ကြွက်တက်ခြင်း၏မူလအကြောင်းခံဇစ်မြစ်ပေါ်မူတည်၍ Calcium chloride အပြင်ဗီတာမင်ဒီသို့မဟုတ် parathyroid ဟော်မုန်းအစရှိသည်တို့ကိုလည်းတွဲဖက်ပေးရသည်။ အရေးပေါ်နှလုံးနှိုးခြင်းများတွင် (အထူးသဖြင့်နှလုံးခွဲစိတ်မှုအပြီးတွင်) epinephrine ကိုအသုံးပြုပြီးသော်လည်းနှလုံးကြွက်သားကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိသေးလျှင် Calcium chlorideကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။Calcium chloride ၏အခြားသောအသုံးပြုပုံအသေးစိတ်တို့ကိုသင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
Calcium Chloride (ကယ်လ်စီယမ် ကလိုရိုက်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Calcium chlorideကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှအသုံးပြုရပါမည်။ အသုံးပြုပုံနှင့်ပတ်သတ်၍မရှင်းလင်းသည်များရှိလျှင်သင့်ဆရာဝန်ကိုမေးမြန်းပါ။
Calcium Chloride (ကယ်လ်စီယမ် ကလိုရိုက်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Calcium chlorideကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့Calcium chlorideကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ရေခဲအောင်သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Calcium chlorideဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကိုကလေးတွေ၊အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Calcium chlorideကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Calcium chlorideကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက်ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Calcium Chloride (ကယ်လ်စီယမ် ကလိုရိုက်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
-အခြားသောဆေးများ ( ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသော၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသောဆေးများ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ၊ ဖြည့်စွက်အားဆေးများအားလုံးပါဝင်ပါသည်)ကိုသုံးစွဲနေရလျှင်။
-သင့်တွင် Calcium chloride သို့မဟုတ် Calcium chlorideတွင်ပါဝင်သောပါဝင်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အခြားဆေးဝါးများနှင့်ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Calcium Chloride (ကယ်လ်စီယမ် ကလိုရိုက်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏သတ်မှတ်ချက်အရကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင်ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် ××× ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
Calcium Chloride (ကယ်လ်စီယမ် ကလိုရိုက်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Calcium chloride သည်အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ယခုဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရမှုမှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်မပါဝင်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။)
ဘယ်ဆေးတွေက Calcium Chloride (ကယ်လ်စီယမ် ကလိုရိုက်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Calcium chlorideဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
Calcium chloride သည်အောက်ပါဆေးဝါးများနှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်သည်။
-နှလုံးဆေးများ (ဥပမာ။။digoxin, cardiac glycosides)
-အရိုးရောဂါကုဆေးများ (ဥပမာ။။Biphosphonates, sodium fluorides)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Calcium Chloride (ကယ်လ်စီယမ် ကလိုရိုက်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Calcium chlorideကအစားအသောက်ဒါမှမဟုတ်အရက်သေစာနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့အစားအသောက်၊အရက်သေစာတွေနဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Calcium Chloride (ကယ်လ်စီယမ် ကလိုရိုက်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Calcium chlorideဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Calcium Chloride (ကယ်လ်စီယမ် ကလိုရိုက်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Calcium Channel Blocker ဆေးလွန်ခြင်းအတွက်
Beta-blocker ဆေးများလွန်ခြင်းအတွက်၊ Glucagon နှင့်Vasopressorဆေးများပမာဏများစွာပေးပြီးနောက်ပေးရန်အတွက်
သိထားသင့်သောအချက်များ။။Calcuim chloride 10% solution ၁ဂရမ် (၁၀စီစီ)တိုင်းတွင်ကယ်လ်ဆီယမ်ဓါတ်အသားတင်၂၇၃မီလီဂရမ်ပါဝင်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Calcium Chloride (ကယ်လ်စီယမ် ကလိုရိုက်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
မွေးကင်းစနှင့်လသားကလေးငယ်များ —–>အများဆုံး၇၅မီလီဂရမ်ကိုအကြောသွင်းဆေးအဖြစ်သွင်းရမည်။ လိုအပ်ပါကထပ်ပေးနိုင်သည်။
အခြားကလေးများ —–>၇၅-၅၁၉မီလီဂရမ်ကိုအကြောသွင်းဆေးအဖြစ်သွင်းရမည်။ လိုအပ်ပါကထပ်ပေးနိုင်သည်။
Calcium Chloride (ကယ်လ်စီယမ် ကလိုရိုက်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Calcium chlorideကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့်အချိုးအစားများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
100mg/ml (10%) အရည်
100mg/ml (10%) အရည်ကိုဆေးထိုးအပ်တွင်တခါတည်းပါဝင်သောပုံစံ။
Calcium chlorideကိုသောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
PasteTextHere Hello Health Group သည် ဆေးပညာအကြံပြုချက်များ၊ ရောဂါရှာဖွေမှုများနှင့် ကုသမှုများကို မပြုလုပ်ပေးပါ
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇွန် 26, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင် 15, 2017
Calcium chloride. http://reference.medscape.com/drug/cacl-or- cacl-2- calcium-chloride-344432. Accessed July 3, 2016.
Calcium chloride. https://www.drugs.com/pro/calcium-chloride.html. Accessed July 3, 2016.
Calcium chloride. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/8561. Accessed July 3, 2016.Calcium chloride. http://reference.medscape.com/drug/cacl-or- cacl-2- calcium-chloride-344432. Accessed July 3, 2016.
Calcium chloride. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/8561. Accessed July 3, 2016.